Lawa ngama-smartphones azobuyekezelwa ku-Android 7.0 Nougat | Izindaba zamagajethi
Lawa ngama-smartphones azobuyekezelwa ku-Android 7.0 Nougat
AmaVillamandos | | Android, AmaSelula, Izaziso
Ngesonto eledlule uGoogle wethule igama lenguqulo entsha ye-Android, ebisemakethe amasonto ambalwa njengenguqulo yokuhlola. Ngemuva kokuqagela okuningi igama elisemthethweni le- I-Android 7.0, kuze kube manje yaziwa nge-Android N, izoba yi-Android Nougat, ukuthi maduzane inguqulo yokugcina izotholakala ngethemba inani elikhulu labasebenzisi.
Ubhapathizo olusemthethweni lwenguqulo ngayinye ye-Android yisibhamu sokuqala sabo bonke abakhiqizi ukuqala ukusebenza ekuvuseleleni amadivayisi wabo weselula. Okwamanje akekho noyedwa oye wazama ukunikeza usuku oluthile, kepha kunabakhiqizi abaningana asebevele bazibophezele ekwenzeni ukuvuselelwa ngokushesha kunakamuva. Isikhathi sokulinda ukufika kohlelo olusha lokusebenza kumadivayisi avela kubakhiqizi abahlukahlukene sizohluka kakhulu. Abanye babo sebevele bayiqinisekisile imephu yabo yomgwaqo ngokusemthethweni kanti okwamanje abanye bathule ngokumangazayo.
Okwamanje sizokukhombisa ifayili le- Uhlu lwabakhiqizi abamemezele isibuyekezo ku-Android Nougat 7.0, kanye nama-smartphones azothola isoftware entsha. Zinkampani ezi-3 kuphela eziqinisekise ngokusemthethweni izinhlelo zazo, ezinye ziyathula, yize sinethemba lokuthi njengoba izinsuku zihamba, abakhiqizi ababaluleke kakhulu emakethe yamaselula bazokhuluma badalule izinhlelo zabo.
10 Abanye abakhiqizi
Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela Amadivayisi eselula akwaGoogle azoba ngowokuqala ukuthola isibuyekezo se-Android 7.0 Nougat, njengazo zonke izinhlobo ezintsha ze-Android. Uma unenhlanhla yokuba nedivayisi kusuka ku-giant search, maduzane uzokwazi ukujabulela inguqulo entsha ye-Android.
Futhi, uma unesibindi noma ngaphezulu uthe ulwazi oludingekayo, ungafaka inguqulo ye-beta ye-Android Nougat ku-terminal yakho ongavivinya ngayo izindaba zale nguqulo entsha, kanye nemisebenzi emisha nezinketho ezihlanganiswayo.
Lapha sikukhombisa ifayili le- ama-smartphones anophawu lweGoogle oluzothola i-Android 7.0 Nougat ngokuqinisekile ngokusemthethweni;
I-Google Pixel XL
Kulolu hlu nakanjani iningi lenu liphuthelwa yi- Nexus 5, okusho ngokusho kwamahemuhemu wakamuva ukuthi kungenzeka ungasitholi lesi sibuyekezo, okungangabazeki ukuthi kuzoba yizindaba ezimbi kakhulu kubasebenzisi abaningi abasenayo le divayisi.
Ngosuku lwakhe Samsung, manje ephethwe uLenovo, ngekaGoogle, okubukeka sengathi bekuhlala kuyinikeza ilungelo eliyinqaba lokukwazi ukwamukela ngokushesha izinhlobo ezintsha zohlelo lokusebenza lwe-Android olwethulwa yi-giant giant emakethe.
Umbhalo wangaphakathi wenkampani uveze uhlu lwamadivayisi azovuselelwa abe yi-Android 7.0 Nougat, yize kunjalo, okwamanje njengoba kwenzeka nabanye abakhiqizi asinalo usuku, ngisho nokukhombisa. Vele, okwamanje lolu lwazi oluputshukile aluqinisekisiwe ngokusemthethweni yi-Motorola.
* ukushaya izandla kancane *?
Idokhumenti yangaphakathi iphakamisa ukuthi iyiphi idivayisi ye-Moto ezothola i- "Android Nougat" pic.twitter.com/3zSLi0rVRn
- UNalin K. (@CrazyNalin) July 4, 2016
Lona Uhlu lwama-Smartphones azobuyekezwa ngokuphepha abe yi-Android 7.0, futhi enye idivayisi engangezwa kuyo;
I-Moto G4 Plus
I-Moto G4 Play
I-Moto X Edition Ehlanzekile
Isitayela se-Moto X
I-Moto X Dlala
I-Moto G (isizukulwane sesithathu)
I-Moto X Force
IDrayivu Turbo 2
I-DROID Turbo Maxx 2
I-Moto G Turbo Edition (isizukulwane sesithathu)
I-Moto G Turbo (i-Virat Kohli Edition)
HTC Kuhlala kungomunye wabakhiqizi bokuqala ukuqinisekisa uhlu lwamadivayisi eselula azobuyekezelwa enguqulweni entsha ye-Android eqinisekiswe ngokusemthethweni. Kulesi senzakalo abaseTaiwan abenzanga ngendlela ehlukile futhi sesivele sinalo uhlu olusemthethweni lwama-smartphones azobuyekezelwa iNougat olushicilelwe ngamanethiwekhi ahlukene wokuxhumana wenkampani.
Vele, lolu hlu esikukhombisa lona ngezansi ukucabanga ukuthi luzokhula, ngoba okwamanje lakhiwe kuphela ngamatheminali ama-3, okusobala ukuthi ambalwa kakhulu enkampanini efana ne-HTC.
I-HTC One A9
I-HTC One M9
Kunoshukela. I-Android Nougat - inguqulo elandelayo ye-Android ye-Google - izofika ku-HTC 10, HTC One A9 ne-HTC One M9. pic.twitter.com/cB5S2zv0PW
- I-HTC (@htc) June 30, 2016
Lapha siqeda ukubuyekezwa kwabakhiqizi ngokusemthethweni, noma ngokuvuza, asebevele bakuqinisekisile amadivayisi eselula azoqale abuyekezelwe i-Android 7.0 Nougat entsha futhi siqala ngabakhiqizi abasele abangaqinisekisanga lutho okwamanje.
Samsung futhi ukuvuselelwa kwezinguqulo ezintsha ze-Android kusheshe kakhulu, ngakho-ke kungalindelwa ukuthi i-Android Nougat entsha izothatha isikhashana ukufinyelela kumadivayisi ahlukene enkampani yaseNingizimu Korea.
Ngokusho kwamahemuhemu, inguqulo entsha ye-Android izofinyelela emakethe yamanje yenkampani futhi Ngingashiya i-Galaxy S5 ne-Galaxy Note 3. Kusuka kulawa ma-terminals kuye phambili futhi uma nje kungaphakathi kwalokho okubizwa ngokuthi maphakathi noma uhla oluphezulu, kufanele ivuselelwe ku-Android 7.0 entsha
Uma une-Samsung smartphone okwamanje, kufanele ulinde uhlu lwamadivayisi ukuthi luqinisekiswe futhi ukwazi ukwazi ukuthi leyo onayo njengamanje ifakiwe kuyo.
Omunye wabakhiqizi omemezele izinhlelo zabo zokuthuthukela ku-Android 7.0 Nougat ezikhathini zakamuva ubelokhu OnePlus, okuthe yize kunamatheminali ambalwa emakethe, yenza umzamo omkhulu wokuzenza zibaluleke futhi ngaphezu kwakho konke ukuzigcina zibuyekezwa.
Lapha sikukhombisa ifayili le- amadivayisi eselula anophawu lwe-OnePlus oluzobuyekezwa, cishe ngokushesha;
Isikhathi esithile manje LG Ungomunye wabakhiqizi abahamba phambili uma kukhulunywa ngezibuyekezo ze-Android futhi ngaphandle kokuqhubeka, i-LG G4 yayiyi-smartphone yokuqala ukuvuselelwa ku-Android Marshmallow (i-Nexus eceleni). Cishe impela, futhi yize okwamanje asinalo ulwazi olusemthethweni, Amadivayisi eselula e-LG azoba phakathi kwabokuqala ukuthola i-Android 7.0 Nougat entsha.
Kulolu hlu kufanele sithole i-LG G5, i-LG G4 ne-LG V10 ngokuphepha okuphelele. Uma izinto zihamba ngendlela efanele, kungenzeka ukuthi lolu hlu lubanzi kakhulu, yize ukuthola ukuthi kuzodingeka silinde i-LG ukuthi iqinisekise ngokusemthethweni ama-smartphones azowabuyekeza.
Okwamanje Abakwa-LG sebevele baqinisekisile ukuthi bazothola i-Android 7.0 Nougat i-LG G5, kanye ne-LG V20 esanda kwethulwa esivele ifakiwe ngaphakathi kuyo ngokwendabuko.
Huawei Namhlanje ingomunye wabakhiqizi ababaluleke kakhulu emakethe yamanje yamaselula futhi-ke izophinde ibuyekeze amadivayisi ayo amaningi eselula abe yi-Android 7.0 Nougat. Kodwa-ke, okwamanje asinalo uhlu olusemthethweni lwama-terminals, yize sikwazile ukuthi abanye babo bangahle bangatholi isibuyekezo nge-OTA, njengenjwayelo futhi ngaphezu kwakho konke ukunethezeka, kufanele sibuyekeze ngokwenza ngokulanda i-ROM.
Ngokusobala, iHuawei P9 ezinhlotsheni zayo ezihlukile, iHuawei Mate S, iHuawei Mate 8 kanye neHuawei P8 kuzoba ngamanye amatheminali angaphuthelwa ukuqokwa nokubuyekezwa, noma ukukuqinisekisa kuzofanele silinde ukuthi umenzi waseChina asho.
I-Huawei ne-Honor bezingebona abakhiqizi abashesha kakhulu ukuvuselela amadivayisi abo, ngakho-ke uma une-terminal evela kumkhiqizi wase-China, into enhle ukuthi uthathe kalula ngoba asikholelwa ukuthi ngokushesha noma okungenani ngasikhathi sinye ukuthi abasebenzisi be-LG noma be-Motorola bazokwazi ukujabulela i-Android 7.0 Nougat entsha kudivayisi yakho evela kumkhiqizi waseChina.
De Sony Singasho ukuthi ngomunye wabakhiqizi abambalwa abazobuyekeza iningi lamadivayisi eselula anayo kukhathalogi yawo. Isibonelo, ngaphandle kokuya kude kakhulu, inkampani yaseJapan iqinisekise ukuthi wonke ama-smartphones omndeni we-Xperia Z futhi cishe bonke labo bomndeni we-Xperia X no-C bazothola i-Android Marshmallow. Ukucabanga ukuthi kwenzeka into efanayo nge-Android 7.0 Nougat entsha, yize singazi ukuthi ukufika kwesibuyekezo kungabambezeleka kuze kube nini.
Ezinsukwini zakamuva amanye amatheminali enkampani yaseJapan aseqalile ukuthola isilinganiso sawo seNougat. Ngezansi sikukhombisa uhlu oluphelele lwamadivayisi azothola inguqulo entsha yohlelo lokusebenza lwe-Android;
I-Sony Xperia Z3 +
I-Sony Xperia Z5 Premium
I-Sony Xperia XA
I-Sony Xperia XA Ultra
Kusukela i-Android 7.0 ifike ngokusemthethweni emakethe Enye yezinkampani ezisebenze kakhulu ukuvuselela amatheminali ayo kube yi-Spanish BQ. Uhlobo olusha lwe-Android ngeke lutholakale kuze kube ngekota yokuqala yonyaka, kepha sesivele silwazi uhlu lwama-smartphones azobuyekezwa ngokusemthethweni.
Okulandelayo sikukhombisa ama-terminals e-BQ azoba ne-Android 7.0 Nougat ngesikhathi esifushane kakhulu;
I-BQ Aquaris U Plus
I-BQ Aquaris U
I-BQ Aquaris U Lite
I-BQ Aquaris 5X Plus
I-BQ Aquaris A 4.5
I-BQ Aquaris 5X
I-BQ Aquaris M5
I-BQ Aquaris M 5.5
Siyakwazisa lokho #Aquaris IX5 Plus, U-range, A4.5, X5, M5 neM5.5 zizothuthukiselwa ku- #android I-7 Nougat pic.twitter.com/YFGT9Dbc67
Sivele sibuyekeze izinhlelo zabanye babakhiqizi ababaluleke kakhulu emhlabeni, kepha ngaphandle kokungabaza abanye abaningi bakhona emakethe, njenge Xiaomi, BQ o I-Energy Sistem. Okwamanje, ngaphandle kwezinkampani esizikhombisile, akekho omunye oqinisekise ngokusemthethweni ibalazwe lakhe lokuvuselelwa.
Ezinsukwini noma emasontweni azayo ngokuqinisekile sizokwazi ama-smartphones amasha azobuyekezelwa ku-Android 7.0 Nougat futhi sizokwazi ukwandisa lolu hlu. Noma ngabe iyiphi idivayisi yeselula onayo, gcina lolu hlu phakathi kwezintandokazi zakho ngoba lapha sizoshicilela zonke izindaba ezenzeka ngesikhathi sokufika kwenguqulo entsha ye-Android kumatheminali ahlukene akhona emakethe.
Ingabe i-smartphone yakho isohlwini olusemthethweni lwamadivayisi azobuyekezelwa ku-Android 7.0 Nougat?. Sitshele esikhaleni esigodliwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu esikuyo futhi usitshele nokuthi ulindeleni kunguqulo entsha yohlelo lokusebenza leselula yakwaGoogle engafinyelela maduze kudivayisi yakho yeselula
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Lawa ngama-smartphones azobuyekezelwa ku-Android 7.0 Nougat
Kufanele ihambisane ne-Samsung S5
Izovuselelwa i-bq aquaris m5
Ingabe ikhona indawo emakethe nasesikhathini sethu nosuku ngeBlackBerry?
Ibhethri elikhulu kakhulu beliyimbangela yezinkinga ze-Galaxy Note 7